यस्ता छन् तोरिको साग खानुका ५ फाइदाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
यस्ता छन् तोरिको साग खानुका ५ फाइदाहरु !!
१ मुटुका लागि राम्रो=तोरीको सागले शरीरमा नकारात्मक कोलेष्ट्रोल नियन्त्रण गर्छ र फोलेटको निर्माण बढाउँछ । यसले कार्डियोभास्कुलर रोगको सम्भावना समेत घटाउँछ ।
२ पेट सफा बनाउँछ=तोरीको साग फाइबरको मात्रा बढाउँछ जुन पाचनको लागि निक्कै राम्रो मानिन्छ । यसको सेवनले पाचन प्रणली स्वस्थ रहन्छ ।
३ कम क्यालोरी बढी फाइवर=तोरीको सागमा क्यालोरी कम र फाइबर बढी हुने हुँदा यसले शरीरको पाचन प्रणाली मात्र राम्रो राख्दैन । मोटोपन पनि नियन्त्रण गर्छ । मोटोपनको शिकार भएकाहरुलाई समेत तोरीको साग लाभदायक छ ।
४ हाडलाई बलियो बनाउँछ= तोरीको सागमा क्याल्सियमको मात्र बढी हुन्छ । यसले पोटाशियमको मात्रा पनि बढी दिन्छ । हड्डी बलियो बनाउन चाहिने यी तत्व तोरीको सागमा पाहिन्छ । हाडको समस्या हुनेलाई समेत तोरीको साग राम्रो मानिन्छ ।
५ आँखा तेज बनाउँछ=आँखाको लागि सागपात सबै भन्दा राम्रो चिज हो । तोरीको सागले आँखाको तेज बढाउँछ र आँखाका मांसपेसी समेत मजबुत राख्दछ। (gnewsnepal बाट सभार)
चर्चित गायिका रेखा जोशीको चुन्नी बजारमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शितलनिवासमा !!